Makushe akanzwa bunny Easter kushongedza
Zvikonzero zvekurudziro Iri ndiro rangu rinofarira boka rezvigadzirwa izvo zvinogona kushandiswa kwese kushongedzwa kweIsita uye kushongedzwa kwemazuva ese kwemba. Tsuro dzakapfeka zvakatsvinda, nemazai mumaoko, mabhasikiti, maruva, kana bhegi resheche rekuvhara huku. Vagadziri vedu vanofungidzira zvekuti havasi kupokana nemumwe. Ivo varume vemaoko ekushandisa vakashandisa yavo inoshamisa tsono vainzwa hunyanzvi kuti iite izvi Mr. naMiss Rabbit yakajeka. Ndinovimba unovada senge zvandinoita! Kana iwe uchifunga iyo ...
Handcraft mvere dzemakonzo chishongo
Zvikonzero zvekurudziro Semutambo, Isita hausi mutambo mukuru, nepo, nekuti iwo mutambo muchirimo, isu tinofunga ndiko kutanga kwenyaya nyowani mugore idzva, saka kushongedzwa kwemba nemusoro wenyaya wePasika nguva dzose kutengesa zvakanakisa. Iwe unofungei nezveIsita muchirimo? Chinhu nezve mazai? Iwe unofunga nezvemakonzo here? Makushe chinhu chakasununguka uye chakapfava, chinoshandiswa mukushongedza pamba chinogona kusimudzira maratidziro echishongedzo. Takaita iri boka remakonzo eIsita nenjodzi ...
Kushongedza, Zvishongedzo, Wall Kushongedza, Krisimasi Chishongo, Wall Art, Kumba Kushongedza,